Farriin haya- Dhalashada - Baby shaybaar haya- Farriin
> Resource > Talooyin > Dhalashada haya- Farriin wiilasha iyo gabdhaha
Waa wax cajiib ah in ay ilmaha, xubin ka mid ah qoyska cusub iyo hadiyad. Sidaas, dad badan, marka uu ilmuhu wax yar ku dhashay, waxa ay la yaaban yihiin sida ay ku war qoyska iyo saaxiibada oo ku saabsan dhalashada ilmahooda. Oo haddii aad doonaysid in aad ilmo ama uun ilmo dhashay, waa in aad mid ka mid ah.
Haya- dhawaaqay Dhalashada waa mid aad u muhiim ah haddii aad doonaysid in aad ka dhigto dhawaaqay ilmuhu dhasho u gaar ah. Mararka qaarkood waxaad noqon kartaa in ay adag tahay in la helo qoraalka dhawaaqay dhalashada kaamil ah oo aad u isticmaali kartaa. Halkan qaar ka mid weyn iyo saaxirka wordings dhawaaqay ilmuhu dhasho wiilasha, gabdhaha, iyo xitaa mataano saddex-laab la siiyaa si aad tixraac.
Kaliya dooro mid ka mid ah oo aad jeceshahay iyo qof walba u sheegno imaanshiyaha aad malab oo si gooni ah!
Tusaalooyin haya- dhawaaqay Dhalashada
Dhawaaqay Dhalashada muunad haya- 1
Faraha yaryar, yar oo suulasha,
Little, itty, dharka bitty,
Dharka, caruusadaha, timaha in Suul,
Garo waxa ... It`sa Girl!
Haya- muunad dhawaaqay Dhalashada 2
Yaa indhaha aqrisanin sida xiddigaha?
Yaa dhoola Clasico qorraxda?
Yaa leh maqaarka waa sida jilicsan
sidii uu yahey moon?
Mise mid ka mid yar oo qaali ah!
waxa uu ku dhashay
on Wednesday, February 19-
Waxay u miisaamay 6 lb.
Muunad haya- dhawaaqay Dhalashada 3
Soo dhacday xiddig A samada ka soo degay
oo waxaannu ku degnay in gacmaha
oo dhan ee macaan Hooyo
iyo dhammaan jiidashada Aabe
Waxaan xiddiga dhuftay imaanshiyaha
Muunad haya- dhawaaqay Dhalashada 4
Nolosheena ka buuxsamay farxad leh,
oo qalbiyadiinna ka buuxiyey jacayl.
Maxaa yeelay, waxaannu ilmaha yar
in aan la riyoodaan oo ah
Muunad haya- dhawaaqay Dhalashada 5
qoslaysa iyo inatahay
oo aan daqiiqad aad ugu dhaqsaha badan
Hoyaday iyo Aabahay qoslay
Oo wuxuu dillaacsadaa farxad ku qayliyey
iyada yaboohay dayaxa!
Muunad haya- dhawaaqay Dhalashada 6
Waxaan wiil ay ka imanayaan
Dhalashada dhawaaqay ereyo muunad 7
Double xafaayadda ka, laba jibaar musmaarradiisa,
aan ku faani dhawaaqo, mataano dhasho our.
Muunad dhawaaqay Dhalashada haya- 8
Ilaah inoo mar kale duceeya
iyadoo hadiyad qatarsanaa -
gabadhayada qurux badan
Waxaan, waalidkeed farxeen Brandon iyo Candice
faraxsanahay boundlessly in uu ku dhawaaqo timi yihiin
Wuxuu ku dhashay Monday, January 31, 2001
Muunad haya- dhawaaqay Dhalashada
Miracles iyo sixir
Iyo riyooyin oo rumowday
Ma ku tilmaami karaa farxaddiinnu!
Iyada oo dhoolo nuuri
Quluubtooda la dhalaalayay
Waxaan soo dhawaynaynaa ilmaheena wiil!
By jidkii, ka dib markii lagu dhawaaqay haya- dhalashada ku haboon, sida ku saabsan DIY dhawaaqay dhalashada sawir u sheegto iyo dabaal imaanshaha ilmahaaga? Wixii sida loo sameeyo kaarka dhawaaqay dhalashada shakhsi, fadlan tag Samee dhawaaqay dhalashada. Oo halkan waa dhawaaqay sawir dhalashada abuuray Wondershare DVD Muqaal dhise .